Izinto ezi-5 obungazazi malunga nekhamera yakho yokhuseleko | Iindaba zeGajethi
Iindaba zeGajethi | 26/04/2021 10:53 | elektroniki
Ukukhuselwa kwekhaya lakho, ishishini okanye iofisi kubalulekile. Kule nto kukho iinkqubo ze-alamu ezihamba neekhamera zokujonga ezithi vumela ukugcina imimandla eyahlukeneyo ikhuselekile kwaye ibone ngexesha elifanelekileyo ukungena kwabangeneleli ngexesha lokwenyani. Nangona kunjalo, basekhona izinto ongazaziyo malunga nekhamera yakho yokhuseleko kwaye ezijike zaba sisixhobo esinezinto ezininzi.
1 Iikhamera zesibonelelo sokhuseleko
2 Izinto ongazaziyo malunga nekhamera yakho yokhuseleko
3 Izibonelelo zokusebenzisa ikhamera yokujonga
Iikhamera zesibonelelo sokhuseleko
Iikhamera zokhuseleko zisebenza njenge ividiyo evaliweyo yesekethe eqhagamshelwe kwinkqubo yokujonga, ebonwa kuphela ngabantu abanokufikelela okuvumelekileyo. Umsebenzi wawo kukurekhoda imicimbi ngexesha lokwenyani, ukuthatha iifoto kwii-angles ezahlukeneyo kunye sasaza bukhoma okwenzekayo nokuba kuluhlu lwama-360 °ukuze umnini abe nezinto zokuxhasa ixabiso xa kubiwe.
Abasebenzisi abaninzi okwangoku baneekhamera zokujonga ezixhumene nealam zabo, ukongeza ekusebenziseni iinkonzo eziphambili ezinje ngezo zinikezelwe Ishukumisi seMosistar Prosegur, kuba bafumanise ukuba zi isiqwenga esisisiseko sokugcina ikhaya lakho okanye ishishini likhuselekile ngalo lonke ixesha.
Kwelinye icala, iinkampani ezifana neProsegur zikunika uluhlu olubanzi lweenkonzo apho Unokukhetha imodeli yekhamera yokujonga ehambelana neemfuno zakhoNokuba ufuna ukubonwa kwesindululo kumagumbi amakhulu okanye kumagumbi amancinci.
Izinto ongazaziyo malunga nekhamera yakho yokhuseleko
Ngaphandle kwento yokuba iikhamera zokhuselo sele zithandwa namhlanje kwaye zisetyenziswa ngokungafaniyo kwiindidi ezahlukeneyo zezakhiwo, Kukho izinto ezingathandekiyo malunga nazo ongazi okwangoku, Njengale ikhankanywe ngezantsi:
Ngexesha lonyaka Iikhamera zokhuselo zika-1960 zazisetyenziselwa ukubeka esweni ukwenziwa kwerokethi eJamani. Inkqubo yayo yayilelwe nguWalter Bruch, ukuze ulandele umcimbi ngaphandle kokubeka ubomi babo emngciphekweni.
Ngophando olwenziwe ngo-2014 kwagqitywa ukuba bekukho ubuncinci i-245 yezigidi zeekhamera zokhuseleko emhlabeni, ezisebenza ngokupheleleyo, inani elithandabuzekayo, elonyuke namhlanje ngenxa yenkqubela phambili kwezobuchwephesha kunye nokufikelela ngokulula kwi-Intanethi.
Ngaba ubusazi ukuba ngalo lonke ixesha usebenzisa iATM ujongwa ngekhamera? Ngapha koko, zininzi iimeko zobuqhetseba ezisombululekileyo ngenxa yemifanekiso ebhalwe kwezi zixhobo.
Kukho indawo apho iikhamera zokujonga zihlala zibekwa zigcina ukurekhoda iiyure ezingama-24 ngosuku, njengoko kunjalo kumaziko okuthenga, iivenkile ezinkulu, iibhanki, iindlela zikawonkewonke kunye neendlela eziphambili kummandla wedolophu.
Ezinye iikhamera zokhuseleko zisebenza ngaphandle kombane, kuba oku kunikwa ibhetri ebavumela ukuba bagcine ukurekhoda ngaphakathi kwexesha elithile.
Okwangoku, uninzi lwabantu luneselfowuni ebavumela ukuba banxibelelane kwi-Intanethi, kwaye oku banokufikelela kwimifanekiso ebonelelwe yikhamera yabo yokujonga ngesicelo esinikezwe ngumboneleli wabo wealam kunye jonga ngexesha lokwenyani okwenzekayo ngaphakathi kwipropathi yakho, naphi na emhlabeni.
Izibonelelo zokusebenzisa ikhamera yokujonga
Iikhamera zokujonga ngamehlo enkqubo yakho yokhuseleko, banamandla okubona intshukumo ngokusebenzisa izinzwa ezibekwe kwindawo efanelekileyo kwaye yenza ialam ngexesha elifanelekileyo ebhaliswe ngaphakathi kumbindi njengaseMovistar Prosegur, oya kuthi azise abasemagunyeni abahambelanayo ngexesha elifutshane.
Ukuze ugcine ikhaya lakho okanye ishishini lakho likhuselekile, ungakhetha eyona nkqubo ilungileyo yokujonga kwaye uqiniseke ukuba ineekhamera ezifanelekileyo kunye nomda owaneleyo wokugubungela. Kuya kufuneka unike ingqalelo iimfuno zakho ezithile, kuba ngokusekwe kuzo uya kukhokela ukhetho lwekhamera yakho yokhuseleko efanelekileyo.
Umzekelo, uzakufumana ezinye zinoluhlu olubanzi njengee-thermals, kodwa umgangatho wevidiyo awulunganga kakhulu; ngeli xesha Ezona ziqhelekileyo zinokugubungela kancinci zikuvumela ukuba uchonge iinkcukacha zomngeneleli ngokweenkcukacha ezinkulu. Kwelinye icala, ukusebenzisa i-PTZ yandisa uluhlu lwakho lokujonga kuba inentshukumo, eyenza kube lula kuwe ukulawula imimandla ethile.
Kwakhona, kuya kufuneka ukhumbule ukuba Ayifani ukukhusela iflethi, i-chalet okanye iofisi kuneshishini, kwimeko apho kuya kufuneka ukhethe inani leekhamera eziyimfuneko ekuqinisekiseni uluhlu olubanzi lokugubungela.
Ngokubanzi, iinkqubo zekhamera yokujonga ividiyo ziyafumaneka ngaphakathi kweekiti ze-alamu ezinjengezo zivela kwi-Movistar Prosegur Alarmas, ezibandakanya zonke izinto eziyimfuneko ekufakweni kwale nkqubo yokhuseleko kunye nokunikezela unxibelelwano olusisigxina kunye nesikhululo sakho sokufumana. , ujonge ikhaya lakho okanye ishishini iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezingama-365 ngonyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izinto ezi-5 obungazazi malunga nekhamera yakho yokhuseleko